Alatsinainy Desambra 27, 2021 Alatsinainy Desambra 27, 2021 Douglas Karr
Rehefa mijery ny famakafakana ny tranokalanao ianao, ny zavatra iray tadiavinao foana dia ny hampitombo ny fiovam-pon'ny mpitsidika. Ny votoaty sy ny traikefan'ny mpampiasa lehibe dia afaka mitarika ny firotsahana amin'ny tranokala iray, saingy tsy voatery mamehy ny elanelana misy eo amin'ny fifampiraharahana sy ny tena mitondra ny fiovam-po izany. Rehefa te hifandray manokana aminao ny olona, ​​azonao atao ve izy ireo? Manana mpanjifa roa izahay izao dia mampihatra widgets famandrihana mandeha ho azy izay ahafahan'ny mpitsidika manompo tena.
Calendly: Ahoana ny fametrahana Popup fandaharam-potoana na kalandrie napetraka ao amin'ny tranokalanao na tranokala WordPress
Alatsinainy Desambra 13, 2021 Alatsinainy Desambra 13, 2021 Douglas Karr
Herinandro vitsy lasa izay, tao amin'ny tranokala iray aho ary nahatsikaritra rehefa nanindry rohy iray aho mba handamina fotoana hiarahana amin'izy ireo fa tsy nentina tany amin'ny toerana haleha aho, dia nisy widget iray namoaka mivantana ny fandaharam-potoana Calendly tao amin'ny varavarankely popup. Fitaovana tsara ity… traikefa tsara kokoa ny fitazonana olona iray ao amin'ny tranokalanao noho ny fandefasana azy any amin'ny pejy ivelany. Inona no atao hoe Calendly? Mitambatra mivantana amin'ny Google-nao